ထိပ်သီး အသင်းဖြစ်ရန် ဆုဖလားများ လိုအပ်သည်ဟု ဂွါဒီယိုလာပြောကြား ဆုဖလားလေးလုံး ရယူရန် ကွင်း?? - Yangon Media Group
ထိပ်သီး အသင်းဖြစ်ရန် ဆုဖလားများ လိုအပ်သည်ဟု ဂွါဒီယိုလာပြောကြား ဆုဖလားလေးလုံး ရယူရန် ကွင်း??
မန်စီးတီးနည်းပြဂွါဒီယိုလာက အသင်း၏ လတ်တလောနိုင်ပွဲများအတွက် ကျေနပ်နေသော်လည်း ထိပ်သီးအသင်းတစ်သင်း ဖြစ်လိုပါက ဆုဖလားအောင်မြင်မှုများရယူနိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ မန်စီးတီးသည် ဘန်လေကိုအနိုင်ယူကာ အက်ဖ်အေဖလား စတုတ္ထအဆင့်သို့တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် တစ်ရာသီအတွင်း ဆုဖလားလေးလုံးရယူနိုင်မည့် လမ်း ကြောင်းပေါ်တွင်ရှိနေကာ အင်္ဂါ နေ့တွင် လိဂ်ဖလားဆီမီးဖိုင်နယ် ပ-ကျော့ပွဲစဉ်အဖြစ် ချန်ပီယံရှစ်ကလပ် ဘရစ္စတိုးစီးတီးကို အိမ်ကွင်းတွင် ဧည့်ခံကစားရမည်ဖြစ်သည်။
ဂွါဒီယိုလာက ”နိုင်ပွဲတစ်ပွဲက နောက်ထပ်နိုင်ပွဲတွေအတွက် အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ကျွန် တော်တို့ရင်ဆိုင်ကစားဖူးတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေလို ထိပ်သီးအသင်းဖြစ် ချင်တယ်ဆိုရင်၊ မန်ယူနဲ့လီဗာပူးတို့လို သမိုင်းကြောင်းကောင်းတဲ့ အသင်းမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဆုဖလားအောင်မြင်မှုတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆုဖလားမရရင်လည်း အဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမယ့် ထိပ်သီးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆို ရင်တော့ဆုဖလားမရရင် မလုံလောက်တော့ပါဘူး”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဂွါဒီယိုလာက အသင်းအနေဖြင့် တစ်ရာသီအတွင်း ဆုဖလားလေးလုံးရယူနိုင်မည့် လမ်း ကြောင်းပေါ်တွင်ရှိနေသော်လည်း အနီးဆုံးကစားရမည့်ပွဲကိုသာ အ လေးထားရမည်ဟု သတိပေးပြော ကြားခဲ့သည်။ ဂွါဒီယိုလာက ”ပြိုင်ပွဲလေးခု စလုံးမှာ အခြေအနေကောင်းနေတယ်ဆိုပေမယ့် ချဲလ်ဆီးကလည်း ကျွန်တော်တို့နဲ့ အခြေအနေချင်းတူ နေတာကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာမှာ ဖလားသုံးလုံးရယူဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံအရ အခုလို ဇန်နဝါရီလထဲမှာ ဒီအကြောင်းကို ပြောဆိုနေတာက လက်တွေ့မကျ ဘူးဆိုတာသိနေပါတယ်။ အားကစားလောကမှာ နောက်လာမယ့်ပွဲကိုသာ အာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်နေပြီး အရမ်းအဝေးကြီးကိုအလေးထား နေရင် မှားပါလိမ့်မယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဂွါဒီယိုလာက ယခုကဲသို့ ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း မန်စီးတီး လူငယ်ကွင်းလယ်လူဇင်ချန်ကိုကမူ အသင်းအနေဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်နေသည့်ပြိုင်ပွဲတိုင်းတွင် ဗိုလ်စွဲနိုင်စွမ်းရှိနေပြီး လေ့ကျင့်ရေးနေ့များ အပါအဝင် နေ့တိုင်း၌ဆုဖလားလေးလုံးရယူနိုင်ရန် ဆန္ဒ ပြင်းပြလျက်ရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဇင်ချန်ကိုက ပွဲကစားခွင့်အတွက် ရရှိလာမည့်အခွင့်အ ရေးကိုရယူနိုင်ရန် အသင့်ပြင်ထား ပြီး ဖလားပွဲများတွင် ပါဝင်ကစားခွင့်ရနေသည့်အတွက် ကျေနပ်ပျော်ရွှင်မိကြောင်း ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်မြဝတီမြို့၌ အသေးစားအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများ များပြားလာသောကြောင့် ဒေသခံမ??
အင်္ဂလန်အသင်းမှ ချန်လှပ်ခံရပြီးနောက် အေးဂျင့်နှင့် ဂျိုးဟတ် လမ်းခွဲ